मन्त्रीसँग टेबुल ठोकेर मुखमुखै « Deshko News
मन्त्रीसँग टेबुल ठोकेर मुखमुखै
‘मन्त्री भएँ भन्दैमा आफ्नो हैसियत बिर्सिने ? जे मन लाग्यो, त्यही भन्ने ?’ यसो भन्दै हाकिम जंगिँदा शान्तपूर्वक सम्झाउने प्रयास भयो, ‘मन्त्रीसँग बोल्दा हैसियत त तपाईँ बिर्सिँदै हुनुहुन्छ !’ तर, जवाफ आयो,‘तिम्रो हैसियत मलाई राम्रोसँग थाहा छ ! के गर्नुपर्छ मैले पनि जान्याछु!’
बहिर्गमित मन्त्रीको ‘खास’ भनी चिनिएका हाकिम नयाँ मन्त्रीसँग मुठ्ठी बटारेर हतहप्ता मुखमुखै लागेपछि हंगामा मच्चिएको छ । रघुवीर महासेठका ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका वसन्त नेम्वाङसँग सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली यसरी कराएका हुन् । राजेश्वर रघुवीरका विश्वासपत्र । उनलाई विस्थापित गरेर गएका नेम्वाङले रघुवीरको डिजाइनमा असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए ।
वसन्तले प्रशासन महासाखा प्रमुखसमेत रहेका राजेश्वरसँग असहयोग गर्नुका कारण सोधेपछि हो, मन्त्रीसँग मुखमुखै लागेको । रघुवीर सिञ्चाइमन्त्री हुँदा निजी सचिव रहेका राजेश्वर भौतिकमन्त्री भएपछि पनि महासेठसँगै पछि लागेर मन्त्रालय चलाए । त्यतिबेला मन्त्रीको निजी सचिवभन्दा पनि कमिसन एजेन्टका रुपमा बढी परिचित थिए । भौतिकमा पनि महासेठले त्यही भूमिकामा राखे । तर, रघुवीरको बहिर्गमनसँगै तिल्मिलाएका राजेश्वरले नयाँ मन्त्रीलाई सुरुदेखि नै असहयोग गर्न थाले ।